musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Interviews » African Tourism Board: Tourism Pasina Zvipingamupinyi Zvino!
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Interviews • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Nyika nhanhatu dziri muEast African Community (EAC) dzakaita First Regional Tourism Expo (EARTE) kuTanzania muna Gumiguru wegore rino. Ichi chiitiko chekushanyirwa kwematunhu chichaitwa nenyika dzinodyidzana nayo zvichitenderera kubva gore rinouya.
EAC Council of Tourism and Wildlife Ministers yakatsigira pakati pegore rino, yegore negore East African Regional Tourism Expo (EARTE).
The African Tourism Bhodhi (ATB) vanga vakamirirwa naExecutive Chairman VaCuthbert Ncube nevamwe vamiriri vekunze kweEAC.
VaNcube vakaita musangano weExecutive Talk pamusoro pebasa reATB mukusimudzirwa kwekushanya kweAfrica.
eTN: Ndechipi chiono chekutanga cheAfrica Tourism Board chakanangana nekushanya kweAfrica?
NCUBE: Chiono chedu chikuru ndechekuona kuti Africa ive "Imwe Tourist Destination” yesarudzo munyika. Takatarisana nekusimudzira, kusimudzira, nekushambadzira kushanya kweAfrica kuburikidza nenzira dzakasiyana.
Izvi zvinosanganisira kubiridzira, kuunganidza zviwanikwa, uye kupesvedzera bumbiro remitemo kuona kuti Africa inova “Nzvimbo Imwe Yesarudzo Munyika.”
Bhodhi (ATB) yave kushanda pamwe chete nehurumende dzeAfrica munzvimbo dzakasiyana-siyana zvatinofunga kuti zvingaita kuti kushanyirwa kukuru muAfrica kukurumidze. Izvi, kusanganisira kubviswa kwezvipingamupinyi pakati penyika makumi mashanu neina dzemuAfrica kukwezva kushanya kweIntra-Africa.
eTN: Ko African Tourism Board iri kubatsira sei nyika dzemuAfrica kuwana zvakawanda kubva mukushanya?
NCUBE: The African Tourism Board yakazvipira kubatsira hurumende, masangano akazvimirira, nharaunda, nevamwe vane chekuita nekusimudzira nekufambisa kukura nekusimudzirwa kwekushanya muAfrica.
Tiri kushanda pamwe chete neUnited Nations (UN) neAfrican Union (AU) kuzadzikisa zvishuwo zveAU Agenda 2063 uye 2030 UN Sustainable Development Goals (SDG) kuburikidza nekushanya.
Izvi zvinosanganisira kushambadza, kushambadza, uye kusimudzira Africa senzvimbo imwe chete yekushanya pamusika wepasi rose wevashanyi.
Boka redu reContinental tourism Board (ATB) rave kutsvagira hurumende dzemuAfrica, masangano emabhizinesi, masangano asiri ehurumende, African Union, nemapoka eUnited Nations nemasangano ematunhu kuti vaone kufamba kwakasununguka kwevagari vemuAfrica kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe.
eTN: Ndeapi mafambiro uye mapoka evanhu ari kunanga neATB?
NCUBE: Chinangwa ndechekuti vanhu vemuAfrica vafambe mukati meAfrica, vachitanga nenyika yavo yekugara - vanhu kuti vafambe mukati menyika yavo sevashanyi vekumba, kozoti matunhu ematunhu, uye gare gare Africa yese. East African Community (EAC) yakagadzira nzira yechikamu chakadai chekushanya kwedunhu.
Tinogona kuona maKenya achishanyira Tanzania nedzimwe nhengo dzeEAC bloc, zvakafanana neTanzania nevamwe vese. Vanhu vanobva kune dzimwe nyika dzeEAC bloc vanogona kushanyira Western Tanzania, Uganda, neRwanda kunoona machimpanzi, magorila asingawanikwe mune dzimwe nhengo dzese.
Pamusoro pezvo, ATB iri kukurudzira kuti vashanyi vese vekune dzimwe nyika vafambe nyore nyore kushandisa vhiza imwe chete kuti vayambuke miganhu yeAfrica. Izvi zvinogona kukwezva vashanyi vazhinji vekunze kuti vapedze mazuva mazhinji muAfrica kuburikidza nekufamba kuri nyore kuyambuka miganhu vachishandisa vhiza imwe chete.
eTN: Kunze kweSouth Africa neArab North Africa, Bhodhi iri kuitei kubatsira Sub-Saharan Africa kuwana zvakawanda kubva kuTourism?
NCUBE: Takabatana nenyika dzakati wandei dzemuAfrica kuronga mashoo ekushanya akanangana neDomestic and Regional Tourism. Takava gore rapfuura (2020), kuratidzwa kwakadaro muTanzania - iyo UWANDAE Expo.
Chikwata chevamiriri veATB kubva kuSierra Leone, Nigeria, South Africa, Botswana, Ghana, Ethiopia, neEgypt chapinda neEARTE muArusha. Zvirambidzo zvekufamba padenda reCOVID-19 zvakanganisa basa redu, asi isu tichiri kuenderera mberi.
Sangano reAfrican Tourism Board parizvino riri kushanda neInternational Tourism Investment Conference (ITIC) muchirongwa chekudyara mari mukondinendi mukusimudzira budiriro yekushanya muAfrica.
Kuburikidza neITIC, vanoisa mari kubva kuBulgaria vachidyidzana nevamwe vanoisa mari, vari kuzogadzira chirongwa chemadhora mamiriyoni makumi manomwe nemaviri mumahotera mana kuNorthern Tanzania, mukati meTarangire, Lake Manyara, Serengeti, neNgorongoro wildlife parks.
Tanzania ndiyo yekutanga kuwana mukana weITIC investments iyo ichatora kubva muna Ndira gore rinouya 2022.
Bhodhi iri kushandawo nehurumende yeHumambo hweEswatini uye yakagadzira zano rinosimudzira tsika dzedu dzemuAfrica. Kuita kwetsika nenhaka chikamu cheDomestic and Cultural Tourism icho chinokwevera mhomho yevagari venzvimbo iyi kuti vasimudzire Domestic Tourism.
eTN: Bhodhi iri riri kubatsira sei kugadzirisa izvi?
NCUBE: The African Tourism Board iri kupawo nzvimbo diki dzekuenda uye vanobata nzira yakananga-inodhura uye inoshanda nzira yekusvika kune kutengeserana, midhiya, uye vafambi mumisika ingangove yevashanyi muAfrica. Chinangwa ndechekuzadzisa kugona kwekushanya kwenzvimbo, uye hwaro hwekushanya hwemumba uye hwemukati meAfrica kudzikisira kutsamira kwevashanyi vekuEurope neAmerica.
Kubuda kwedenda reCCIDID-19 kwakange kwadzidzisa chidzidzo chekuti Africa inofanirwa kuzvimiririra mukushanya. Kuvharika uye zvirambidzo zvekufamba zvakatemerwa muEurope, United States, Asia, uye mimwe misika ingangove yevashanyi yakanga yakanganisa zvakanyanya kushanya kweAfrica.
Africa inogamuchira vashanyi vangangosvika mamirioni makumi matanhatu nembiri kubva pavashanyi vanopfuura bhiriyoni pasi rose vanorekodhwa gore rega rega. Europe inogamuchira vangangoita 62 miriyoni vashanyi pasi rose.
Yedu Tourism Board yave kusundira kune mabhuroki ekushanya ematunhu. Idanho rakakodzera rakananga kuchinangwa chehurongwa hweAfrica kuona EAC semubatanidzwa unobatana maoko munzira inosanganisirwa uye yakanyatsorongeka.
ATB ichaita shoo kuQatar Travel Mart (QTM) iri kuitika pakati paMbudzi. Takakoka makurukota ezvekushanya emuAfrica kuti atore chikamu, tichivavarira kukwezva vashanyi vakawanda kuti vashanyire Africa uye zvakare kukwezva kusimukira kwekushanya kwemukati meAfrica.
eTN: Ko African Tourism Board yakayera sei yekutanga East African Regional Tourism Expo (EARTE)?
NCUBE: Tourism mudunhu reEAC yanga yakanganiswa zvakanyanya. Bazi reEAC Secretariat rakaratidza kudzikira kwekushanya kwematunhu kunosvika 67.7 muzana gore rapfuura (2020) kusvika kuvashanyi vekunze vanosvika mamirioni maviri nemazana maviri neshanu, vachirasikirwa neUS $ 2.25 bhiriyoni kubva mumari yevashanyi.
Dunhu reEAC rakambofungidzira kukwezva vashanyi mamirioni gumi nemana muna 14 denda reCCIDID-2025 risati rabuda rakakanganisa maitiro.
Dunhu reEAC rine chikamu che8.6% chete chemari inowanikwa muAfrica yekushanyirwa kwenyika uye 0.3% yezvikamu zvekushanyirwa pasi rose.
Kenya neTanzania muenzaniso wakanaka wekuuya kwedunhu bloc apo vashanyi vanogona kuyambuka miganhu yenzvimbo kuti vaone vobva vanakidzwa nezviwanikwa zvevashanyi zvakagovaniswa.
The African Tourism Board parizvino iri kushanda pamwe chete nehurumende dzemuAfrica pamwe nenhevedzano yemasangano anopa rubatsiro kusimudzira hukama pakati penharaunda nevatambi vekushanya.
Hapana tourism pasina nharaunda. Nharaunda ndivo vamiriri vezvekushanya. Kushanya kwedu mukushanya muAfrica kwakavakirwa mukati menharaunda.
eTN: Kubva pamaonero eATB, zvinorevei kutora chikamu muEARTE yekutanga?
NCUBE: Idanho chairo rakananga kuchinangwa chegwaro remuAfrica kuona EAC iri mubatanidzwa wakabatana mawoko akasiyana nekupatsanurwa kwega kwega uko kusingazotiendese kure sekondinendi.
Tarisai, takaona kufambiswa kwaitwa nemutungamiri weTanzania, Samia Suluhu Hassan, shasha uye muvambi wegwara rebudiriro reAfrica kuburikidza nekushanya. ATB yakapa Mutungamiri Samia mubairo weContinental Tourism Award 2021. Akamira akasimba apo chikamu ichi chakaramba chichidzoka mukati medenda reCovid-19.
Mutungamiri weZanzibar, Dr. Hussen Mwinyi, akatanga chirongwa chegore negore cheEARTE muTanzania kuti chitenderere pakati penhengo imwe neimwe. Iyi expo yedunhu ichange ichiratidzira Africa senzvimbo imwe chete yesarudzo, paine tarisiro yekubuda kwekondinendi. Tinofanira kuputsa zvipingamupinyi.
eTN: ATB yakaparura here matanho ekugadzirisa kuti chikamu chekushanyirwa chidzoke patsoka dzaro?
NCUBE: Sangano reAfrican Tourism Board riri kushanda pamwe nenyika dzemuAfrica mukukurudzira kuvandudzwa kwekushanya muEast Africa neAfrica. Tiri kushandisa network yedu yedunhu nepasi rose yekushambadzira uye vezvenhau kukurudzira vashanyi vazhinji kuti vatore vobva vashanyira Africa.
Iyo ATB iri kuwedzera pamikana yekushambadzira, hukama neveruzhinji, mari, kushambadzira, kusimudzira, uye kumisikidza niche misika yekushanya.
Mukubatana nenhengo dzakazvimiririra uye dzeveruzhinji, iyo African Tourism Board inosimudzira kukura kwakasimba, kukosha, uye mhando yekufamba uye kushanya muAfrica.